♨ . Qu Te Kitchen: ကင်းမွန် ငရုတ်နှစ်ကြော်
ပထမပို့မှာ နုတ်ဆက်ထားလို့ ထပ်ပီး နုတ်မဆက်တော့ဖူးနော် ဒီနေ့ တရက်ထဲ ဟင်း ၂ ခါချက်ပြီး ပို့စ်တင်နေတာဆိုတော့ နည်းနည်းများထူးဆန်းနေမလား ဟင် :D ဟုတ်တယ် ( ကိုယ်ကိုကိုယ်မေး ကိုယ့်ဘာသာပြန်ဖြေ :P) ရေကြောမြေကြောလိုက်သွားပဲ ပြောရမလား . အနေကြာလို့လား မသိ၊ မသိစိတ်ထဲမှာ ဒီက အကျင့်တွေ မသိမသာ ကူးစက်ခံနေရပါလား??? မသိလိုက်ဖူး။ သိလိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲ အို အို့ B ပိုးထက် ဆိုးနေတယ် :P ဘာဖြစ်နေလဲ ဆိုတော့ အထုလောလောရှယ် အတဲနာနေလယ် ရှင့် ... ခိုရီးယားဇာတ်လမ်းထဲမှာ အသဲကွဲတာမြင်ဖူးကြတယ် ဟုတ် ဘယ်လိုဖြေသိပ့် လဲ သိလား အရက်သောက်တယ် မုန့်တွေအများကြီးစားတယ် ပြီးရင် ကုန်းပိုးစီးရမယ် ဟိဟိ .. ကျူတီမ အတွက်တော့ .. တခုတော့ချွှင်းချက်ပေါ့ မုန့်စားမယ် ကုန်ပိုးစီးမယ် ... ခုလောလောဆယ်တော့ ကုန်းပိုးခေါ်ချင်ပါတယ် ပြောတဲ့လူ မရှိသေးဖူး (Qt က လူကောင် နည်းနည်းထွားတာကို :D) ပိုးကြည့်ပါလား ပြိုကျသွားမယ် :D :D.. လေဖောနေတာများသွားပြီ ဒီနေ့ မနက် ထမင်းကြော် ညနေ ကင်းမွန် ချက်စားတယ် ဒီတခါချက်တဲ့ ကင်းမွန်က အကောင်အစို မဟုတ်ဖူး အခြောက်ကို မွနေအောင် ရိုလာစက်ထဲကြိတ်ပြီး အချောင်းလေးတွေကို ချက်စားတာ။ စားလို့ကောင်းတယ် :P ကင်းမွန် အခြောက်ကို ကင်ပြီး မိုင်းရိုးနက်စ် နဲ့တွဲစားကြသလို အခုလိုလည်း ချက်စားကြတယ်။ ချက်ရတာလွယ်ပါတယ်။ (ချက်ရတာလွယ်လဲ ၀ယ်ရမလွယ်အုံးမှကို. နော့.. :P) ဟင်းချက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တာတွေက
၁) ကင်းမွန် 80 g
၂) ငရုတ်နှစ် ၁ ဇွန်း
၃) ငရုတ်သီးမှုန့် ၁ ဇွန်း
၄) သကြား ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်
၅) ငံပြာရည် ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်
၆) ပြောင်ဖူးကော်ရည် ထမင်းစားဇွန်း တ၀က်
၇) ၀ိုင် ၂ ဇွန်း
၈) ရေ ၃ ခွက်
၉) နှမ်းဆီမွှေး အနည်းငယ်နှင့်
၁၀) မိုင်းရိုးနက်စ် တို့လိုအပ်ပါတယ်
photo from googleကင်းမွန် အကောင်လိုက်ကင် မိုင်းရိုးနက်စ် ၊ ဘီယာ နဲ့ဆို ရှလွတ်ပဲ :P
$4ကျပ်ဖိုး ဒီ ဇလုံ တလုံးစာလောက် ရတယ်။ များလွန်းတယ် တ၀က်ပဲချက်မယ်။
မိုင်းရိုးနက်စ် ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်းစာကို ကင်းမွန် အခြောက်များနှင့် အသားထဲစိမ့်ဝင်အောင် နယ်ပါတယ် မိုင်းရိုးနက်စ်များနှင့်နယ်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက် နှပ်ထားလိုက်တယ် အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့ အရသာအချိုးအစားအတိုင်း ရေ ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ပါတယ်
မီး အနည်းဆုံးနှင့် မကြာခဏ မွှေပြီး ရေခမ်းအောင် တည်ပါမယ် ၁၀ မိနစ်လောက်တည်ရင် ရေခမ်း၍ ကင်းမွန်များလည်း နူးညံ့နေပီ
ကင်းမွန် ငရုတ်နှစ်ကြော် ( လုံးဝ မစပ်ပါ :D )
ဒီဟင်းကို ဟင်းအရံအဖြစ် စားသုံးကြပြီး ထမင်း၊ကင်မ်ချီ အရည်သောက်တမျိုးလောက်ဆို ထမင်းစားမိန်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ကင်းမွန်အနံနှင့်တူတူပါပဲ။ ကင်းမွန် ငရုတ်နှစ်ကြော်ကို ယ္ခုလို ချက်စားကြသလို အနှစ်များများကြိုက်နှစ်သက်ရင်လည်း ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ နဲ့  ချက်စားလို့ရပါသေးတယ် Qt က ဒီလို မျိုးပဲကြိုက်တယ် ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ နဲ့ချက်ရင် ကင်းမွန်အရသာ ပေါ့လို့ မကြိုက်ဖူး ( စာကြွင်း - မနက်ဖြန်ကျ ညလေးလေပြေအတွက် ထမင်းသုတ်ပို့ပေးရအုံးမယ် မေ့နေ့ရင် ဦးနှောက်ထုတ်ပီး အသစ်လဲကျစ်မယ် တဲ့ မွှားမွှားး ကျောက်စာဂျီး :P
အရံဟင်း ( 반찬)
✿ .Q-te Menu Titles
မုန်လာဥ ကင်မ်ချီ (Kkadugi kimchi )
တူနာ ကင်မ်ချီ ဘိုကွမ်း ထောဘတ်
June 2012,Kpop music market top ten song and Baek ...
မုန်လာဥခြောက် ကင်မ်ချီ (Seasoned Radish)
ဒိန်ဂျမ်းကျီးဂဲ ( ပဲငပိဟင်းချို)
✿ .Comment Request Menu ^v^
❈ . ဂဏန်းပဲငံပြာရည်ချိုစိမ့်
❈ . ထန်းစု
❈ . ဖရုံကျို
❈ . မူးလ်ဂိုဂီကျီးဂဲ
✿ . Popular Posts
ချစ်သော မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ပိုစ့် မတင်ဖြစ်တာ ၁ လကျော် ကြာသွားပါတယ် :(( ဆောင်းတွင်းဆို ဒီမှာ အသားငါး က...
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ အချိန်ရတာနဲ့ ချက်ဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာအစားစာများကို စုပေါင်းပြီး တင်လိုက်ပါတယ် :)) ။ ဟင်း...
ဘလော့ရောက်လာ မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ရေညှိကြော် မွှေးမွှေးလေး လုပ်နည်းက လွယ်လွန်းလို့ မပြောပဲနဲ့ကို သဘောပေါက်လောက်တယ် :P ။ ဗ...
ယနေ့ စားဖွယ်စုံ ချစ်သော မိတ်ဆွေများအာလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ အခုတလော အရှုပ်တွေ လုပ်နေတာနဲ့ ပိုစ့်တင်မယ် တင်မယ် နဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူး။ ဘလော့မှာ ဟင...
ဘတ်ဂျူး ကင်မ်ချီ - မုန်ညှင်းဖြူထုပ် ကင်မ်ချီ
ချစ်သော မိတ်ဆွေများ အားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ကင်မ်ချီ အမျိုးအစားပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် လူကြိုက်များဆုံး ကင်မ်ချီ ၁၀ မျိုးမှာ Na...
မင်္ဂလာပါရှင် မနေ့ညက Fb မှာ Sistar club အကြိုက်ချင်းတူ သူငယ်ချင်းတယောက် ရလိုက်တယ်။ :P စကားတွေ အများကြီးပြောကောင်းနေတာ အချိန် မကြည်...
ပဲ အီကြာ ဘဲပေါင်းထမင်းကြော် ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့ ဘာရယ်မဟုတ် အဆင့်ဆင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ထားမိတာနဲ့ ပဲပြုတ်ပိုစ့်လေး အမှတ်တရ တင်ပါဥ...
✿ . Q-te Catalogue
✒ Big like,blog list
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေး
Norton Antivirus 2013 Version.20.1.0.24
Galaxy S3 Mini [I8190 /N /L] version v4.1.1 and 4.1.2 ကို Root လုပ်နည်း...
Everyone's Blog Posts - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မြန်မာသတင်းများ - News about Myanmar - Burma - 12345
မိတ္ထီလာပဋိပက္ခအတွင်း နေအိမ်မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သူများ မူလနေရာမှာ ပြန်နေလို
Shirtless Aung Thiha
He changed my life - ဆယ်မြူရယ်စိုးလွင်
Taylor Swift lookalike got beaten by bullies who envy her resemblance to star singer
Adobe Photoshop CS4 အသုံးပြုနည်း Ebook
အမေများနေ့ အမှတ်တရ အမေ့လက်ရာများ
အရှင်ဆန္ဒာဓိက နှင့် ညီ ကိုညိုဝင်း(ယာ) အစ်ကို ကိုဌေးဝင်း(ဝဲ)
ဈေးနုံးချိူသာစွာနဲ့ နိုင်ငံခြားကို Pfingo နဲ့ ဖုန်းပြောချင်သူများအတွက်................
မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး ရမညျးသငျးမွို့နယျ၌ ဆူပူအကွမျးဖကျမှုကွောငျ့ မီးလောငျမှု ဖွဈပှား
ဘဝမှာ လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မီဒီယာဆိုတာ ဖွတာပဲ´´ဟူသော သဘောထားမှတ်ချက်ကြောင့် ကန့်ကွက်ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်
India တွင်ရောက်နေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
my Life in Korea | ~This isaplace i express my experience,feeling,love and life in Korea~
snowStorm.flakesMaxActive = 96; // show more snow on screen at oncesnowStorm.useTwinkleEffect = true; // let the snow flicker in and out of view
ဟင်းချက်နည်းများအား (အခကြေးငွေဖြင့် မီဒီယာများတွင်အသုံးပြုခြင်း လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ) . Watermark template. Template images by Maliketh. Powered by Blogger.